Iingcebiso malunga nokukhetha ilungelo emva kokutsheva kwimeko nganye | Amadoda aQinisekileyo
Ukuba unomkhwa wokucheba ngesitshetshe, uyakwazi oko Emva kokucheba, ukucaphuka, ukurhawuzelela, kunye neendawo ezibomvu zinokwenzeka ebusweni bakho.
1 Ezinye iingcebiso zokukhetha emva kokucheba
2 Uhlobo lolusu
3 Olunye ukhathalelo, ukongeza emva kokucheba
Ezinye iingcebiso zokukhetha emva kokucheba
Emva kokuchetywa kwesicelo emva kokutsheva, Ukongeza ekuncedeni ukuvala ii-pores zolusu lwethu, ezinokuthi zihlale zivulekile, ziya kuthi zikhusele ulusu ngokuchasene neearhente zangaphandle.
Kukho oko kuphephe ukukhetha emva kokucheba okuqulathe utywala, ngakumbi ukuba unesikhumba esibuthathaka. Utywala bunokuba nefuthe elichaseneyo nalowo ufunayo, Oko kukuthi, kunokubangela ukuqaqamba kwesikhumba.
Amanqaku ziingcali kwintengiso. Sukuhendeka ekuthengeni imveliso enesikhumba esifanayo nomlingisi okanye imodeli kwintengiso. Into elungileyo iya kuba vavanya kakuhle izinto emva kokucheba, kwaye ujonge ukuba lolona lufanelekileyo na kulusu lwethu.
Kwimeko ye isikhumba esomileyo, emva kokutsheva kuya kunceda ukomeleza uxinzelelo lweempawu, ukubonelela ngokuqina kunye nokuphumla.
Nge Ulusu olunamafutha, injongo yokutsheva emva kokuba ibe kukubuyekeza amanqatha angaphezulu kwiderm. Kufuneka kukhunjulwe ukuba, kwezi meko zolusu olunamafutha, eyona mveliso ifanelekileyo yifomathi yejeli.
Ukuba uhlobo lwe ulusu lubuthathaka, uhlobo olukhethwe emva kokuba luchetyiwe alunabutywala. Zininzi iimveliso ze-hypoallergenic kwimarike.
Olunye ukhathalelo, ukongeza emva kokucheba
Emva kokutsheva emva, kunjalo Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ikhrimu yokuthambisa kulusu lobuso, kubandakanya ne-contour yamehlo. Imalunga nokuba ulusu lobuso bethu luyabuya, kwaye sifezekise imvakalelo yentuthuzelo yempilo-ntle.
Kusempilweni ukuhlamba ubuso bakho ngaphambi kokuba ulale, kwaye usebenzise iikhrim ezithile isiphumo sokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ngokukhawuleza.
Imithombo yemifanekiso: OKDiario / TuBellezaMundo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Ngaba uyazi ukuba ukhethe okungcono emva kokutsheva kwesikhumba sakho?
Izitshixo ezintathu zokubetha iblukhwe yempahla